New patent inogona kubatsira Siri kutevedzera matauriro ezwi redu pachedu | Ndinobva mac
Mutsva patent inogona kubatsira Siri kutevedzera matauriro ezwi redu pachedu
Mune patent nyowani yakamisikidzwa neApple, zviratidzo zvinoratidzwa izvo zvinoita sekuratidzira maitiro ekuchinja kwezwi, naro Siri aigona kugadzirisa rake "izwi" kuti riwirirane nematauriro acho kune iyo inoshandiswa nemushandisi. Neiyi nzira, kana isu tiri munzvimbo yakanyarara, Siri aisazonzwika mune yakajairwa toni, asi aizochinja vhoriyamu yayo zvinoenderana nemamiriro ekunze.
Sezvatinoziva, Apple isinganeti inotsvaga nzira yevashandisi kushandisa izere kugona kunopihwa nemidziyo yechiratidzo. Ichi chitsva chigadzirwa chingaite kuti zvikwanise kutora mukana wehunhu mune akawanda akawanda mamiriro izvo zvinotipa isu kuve nemubatsiri chaiwo pazvigunwe zvedu kuziva mamiriro ekunze, kana kutofonera mumwe munhu kana kutumira mari kune mumwe munhu wekutaurirana.
Iyi patent, parizvino yakatonyoreswa, haina zuva rekushandisa, asi vane tarisiro kwazvo vanotarisira chiitiko chitsva ichi muSiri chegore rino 2018, zvese pane zvishandiso zveIOS uye pane ese 64-bit Mac makomputa.
Zvinoenderana neruzha rwezvakatipoteredza rwatinarwo maringe nemamiriro api ezvinhu, Siri aizoenzanidza dhizaini yake, achienderana nemamiriro ezvinhu. Apple inotsvaga neiyi iyo vashandisi vanoshandisa Siri kupfuura yatiri kuishandisa ikozvino.
Panguva dzinoverengeka, tinozviwana tisingakwanise kushandisa Siri kunzvenga kukwezva kana kutsamwisa, asi neichi chitsva patent zvinotsvakirwa kuti "hurukuro" yatinayo nemubatsiri wedu chaiye iva wepedyo sezvinobvira.
Maererano nedzimwe nyanzvi, Siri anga achigadzirira kunyange kupindura mukuzevezera, uye kunzwisisana mune imwechete toni, chimwe chinhu icho chenguva yacho chisingafungidzike, nekuti mubatsiri anoda imwe vhoriyamu kuti vatinzwisise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mutsva patent inogona kubatsira Siri kutevedzera matauriro ezwi redu pachedu
Inosara pamutengo mumwe chete weApple Care + yeMac yeMac Pro
Apple inopa mamwe mamirioni emadhora kune vanobatwa neCalifornia moto